Xuduudka Somaliland iyo Djibouti Oo Maalintii 2-aad Xidhan | Haatuf Media Network
Xuduudka Somaliland iyo Djibouti Oo Maalintii 2-aad Xidhan
Saylac, allergist February 22, link 2015 (Haatuf) – Xuduudka Somaliland iyo Djibouti ayaa maalintii labaad xidhan kadib markii ay soo baxeen warar iftiiminayo arrimo amaan darro. Xidhista xuduudka ayaa saamayn ku yeelatay Nolosha Shacbiga Somaliland ee Galbeedka oo ku xidhnaa Dalka Jabuuti.
Xadka waxaa xidhay dawladda Jabuuti oo la http://www.retked.ee/viagra-online-store sheegay inay heshay warar sheegaya falal amaan darro oo ku soo foolleh dalka Jabuuti. Dawladda Jabuuti wali war rasmi ah kama soo saarin xuduudka xidhan.
Cabdirisaaq Waaberi Rooble, cialis Badhasaabka Gobolka Salal, ayaa maanta saxaafadda la hadlay waxaanu xaqiijiyay in xadhiga xuduudku la xidhiidho tuhunno Argagixiso “Xidhista Xadka waanu ka wada soconnaa Dhinaca Jabuuti iyo Dhinaca Somaliland-ba. Waa laga wada socdaa, Wasiirka Daakhiligu waa la socdaa, warar baa jira la leeyahay waxbaa jira, markaas labada dhanba feejignaan baanu galnay” ayuu yidhi Badhasaabku
Wasiirku xigeenka Amniga ee Wasaaradda Arrimaha gudaha Somaliland ayaa in muddo ah ku sugan Jabuuti, balse waxa uu Badhasaabka Salal sheegay inuu Wasiirku dano gaar ah u it's great! viagra buy joogo halkaasi arrintanina dabadii soo baxday.